Nimcada Alle Ku Siiyay Garawso! |
Nimcada Alle Ku Siiyay Garawso!
(Garawshiyaha nimcada Alle kuugu deeqay, waa albaabka laga galo nolol farxad iyo Guulo leh.)
( Haddii aad ku mahadnaqdaan nimcooyinka aan idin siiyay waan idiin siyaadin haddii aad ka gaalowdana cadaabkaygu waa mid daran/kulul) ayuu ilaahay ku yidhi suuratul Ibraahim
Haddii aad garawsato nimcooyinka Alle kuugu deeqay ee aanay arkayn indhuhu se uu qalbigu dareemi karo, waa mid ka mid ah waxyaalaha shaqsi ahaan ku dhiirigalin kara, qof walba oo Aduunka ku nooli waxa uu tabayaa wax ka maqan; oo ma jiro qof ay u dhantahay dhammaan waxyaalihii nolosha uu ka rabay.
Nimcada aad haysato ha ahaato mid caafimaad, ha ahaato mid mansab, ha ahaato mid Diineed, ha ahaato
mid farxadeed, ha ahaato mid nabadeed, ha ahaato mid aqooneed, ha ahaato mid hal-abuurnimo; intaba Illaahay ayaa kuugu deeqay; waana mid aanad adigu ku dooran ama ku helin awoodaada oo kaliya se Alle kuugu deeqay.
Mar kasta oo aad dareento diiqad nafsiya u fiirso nimcooyinka ka qarsoon indhahaaga ee Alle kuugu deeqay, bal u fiirso marka aad xanuusato waxa macno kuu yeesha oo muhiim kuu noqda caafimaadka; waxa maskaxdaada ku soo dhaca su’aalo badan oo ay ka mid yihiin “ Haddii aan caafimaad heli lahaa wax kaleba umaan baahdeen?” taasi waxa ay ina tusinaysaa in ay nimcadu tahay mid aynu dareeno oo kaliyaata marka ay inaga maqantahay.
Bal soo booqo dhakhtar adiga oo isku buuqsan ama murugo badan ku haysato oo u fiirso dadyowga jiifa sariiraha ee da’ ahaan qaarkood yihiin kuwo kula mid ah ama kaa yar, qaarkoodna yihiin kuwo dhimashada ku dul sugaya sariirta oo aan cabanayn; adiguna aad kaliyaata ka cabanayso noloshii oo kugu yar adkaatay fahmina kari wayday ama mid ka mid ah laxaaadkaagii oo aad beeshay.
Ka waran inta qof ee noloshooda ku dhamaysatay xabsiga adiguna aad iska damaashaadayso ee aad haysato nolol xor aad u tahay?
Immisa adiga oo kale ah ayaa aan awood u lahayn inay nolol nabad leh ku noolaadaan oo kaareeyaal, iyo diyaarado lagu rushaynayaa guryahoodii?
Adiguna aad ku naaloonaysaa nabad!!!.
Haddii Alle kaa qaaday mid ka mid ah laxaadkaaga macnaheedu maaha in aad tahay qof aan nimco haysan, laxaad la’aantu maaha dhibaato wayn se waxa ka xun oo ka xanuun badan qof Alle intaba u dhamaystiray oo aan Alle ugu mahadnaqin.
Nimcada aad haysato cabirkeedu waa in aad aragto oo aad u fiirsato kuwa adiga oo kale ah ee ay ka maqantahay, Alle u mahad naq xoog kumaad heline. (Alxamdulilah).
Warwarku maaha xalka dhibaatada ee waxa uu buunbuuniyaa oo uu baaxad u yeelaa dhibta ku haysata; dhammaan xalkii aad heli lahaydna wuu kaa mashquuliyaa ugu danbayna wuu ku dulleeyaa.
Ha iloobin in ay Aduunyadu tahay daartii imtixaanka Alle inoo keenay ee laynagu kala reebayay; si aynu u helo Abaal marinta aynu u qalano oo ah Cadaab ama Janno.
Nimcada ugu weyn ee uu qof helaa waa Iimaanka, haddii aad leedahay Iimaan kaa dabra xumaanta Alle ka cabsina ku fara waxa aad tahay qof guulaystay; guulaysan doonana Aduun iyo Aakhiraba.
Nolosha carqaladuhu kama dhammaadaan se xal lagu dhaafo ayay leeyihiin.
W/Q: Xamse Tudhaale
Halkan ka Daawo Waraysi Lala Yeeshay Af-hayeenka Ciidamada Badbaado Qaran…
Araday balan Ku Qaaday inay codkooda la garab istaagayaan Macalinkooda…
Wargalin Muhiima Aaska alle haw Naxariistee Dr Maxamed Yuusuf…
Kama Welwelsani Nolosha Caruurtayda, Alle Ayaa Go'aaminaya Sida ay u…
Dood Xasaasiya Oo Ku Saabsan Arrimaha Doorashooyinka Somaliland Oo Dhexmaray…